Mandoa fitsangatsanganana any Dubai, miavaka eo amin'ny toerana be mpitady indrindra eto ambonin'ny planeta ary miaina ny zavatra mahafinaritra rehetra entin'ny tanàna eo ambony latabatra. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny zavatra mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra azonao atao mandritra ny dianao mankany Dubai.
Dubai dia toerana iray tokony hitsidihanao atleast indray mandeha amin'ny fiainanao. Zahao ny Sidina Dubai mankany Delhi ho an'ny tapakila fiverenanao raha toa ka manana drafitra efa voavoatra tsara ianao ary fantatrao ny fotoana hiverenanao amin'ny dianao. Dubai dia tsy momba ny skyscraper lava sy ny fomba fiaina manjavozavo ihany. Azo antoka fa misy izany rehetra izany, saingy misy maro hafa. Ho gaga ianao amin'ny zavatra mahaliana rehetra atolotry ny mpitsidika handray anjara. Voatonona etsy ambany ny zavatra mahafinaritra indrindra any Dubai.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny fandehanana any amin'ny Mall of the Emirates dia ny, ny foibe fiantsenana dia feno fahagagana. Efa nisy nahita dia an-tsambo na fitsangantsangana an-tsambo teo amin'ny fiainanao ve? Sanatria! Ankoatr'izay, ny mahalasa saina ny olona marobe dia tsy ny tena zava-misy marina momba ny fanaovana skiing sy ny snowboarding dia natao tao amin'ny foibe fiantsenana, fa ny fomba tena nanaovan'izy ireo ny diany niampitampitso teo afovoan'ny tany efitra dia tombana lehibe tokoa.
Mandehana Chopper Ride Over Dubai
Raha sendra tsy mila mahita ny hakanton'i Dubai sy ireo nosy Palm ianao, dia tsy hahita izany amin'ny toerana iray, satria toa mitovy daholo eo imasontsika ireo teboka ireo. Tokony hamandrika fitsangatsanganana helikoptera ianao hiaina sy hijoro ho vavolom-belona amin'ny halehiben'ny Dubai. Ny hatsarana manasaraka azy amin'ny toerana hafa eto ambonin'ny planeta sy ny asa mazoto, ny fananana ary ny fanoloran-tena niainany mba hahatonga an'i Dubai ankehitriny. Azonao atao ny mamandrika ny dianyo an-tserasera na mifandraisa amin'ny maso ivoho ary dia ho hitany fa hahazo toerana hipetrahana ianao.
Raha sendra olona manokana ianao dia ho tia an'i Dubai satria io no toerana tokana eto an-tany izay itondrana Lamborghinis ho fiara mahazatra. Ny Audis sy BMW dia zara raha misy any Dubai satria ny Maseratis, Rolls Royce ary Cadillacs dia mivoaka eo amin'ny fiaramanidiny. Na ahoana na ahoana, raha mpankafy motorsport ianao, dia ho afa-po kokoa. Misy làlana isan-karazany any Dubai izay ahafahanao mihazakazaka fiara mandeha fiara na raha sambatra ianao ary miatrika ny dianao dia azonao atao ny manatrika ny hazakazaka Formula 1 eto. Azonao atao koa ny manandrana ny tananao amin'ny go-karting ary mandray anjara amin'ny hazakazaka karting.
Zavatra iray tsy azonao andaniam-potoana lehibe iray rehefa mandeha amin'ny toerana toa an'i Dubai ianao dia Safari Safari. Raha sendra mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao dia azonao atao ny mangataka amin'ny mpiandraikitra ny trano fandraisam-bahiny handamina fitsangantsanganana ho anao. Afaka mandehandeha eny amin'ny havoana fasika ianao ary miaina ny fihobiana ao anaty tsindrin-tsakafo mety. Azonao atao koa ny mitoby amin'ny alina any an'efitra, izay tsy ho raharaha toa an'i India izay misy ny moka voahodidin'ny fofona maimbo eraky ny toerana. Any Dubai, natsangana ny jiro ara-dalàna ary handrehitra ny fikolokoloana ho toy ny eritreritra aorian'ny hipetrahanao sy hankafizanao ny ampahany amin'ireo mpanakanto mpanao paunch tena tsara manao izay ampiasainy manokana!
Ny mahafinaritra sy manaitaitra zavatra tokony hatao any New Delhi tsy tonga eo akaikin'ireny zavatra mahaliana any Dubai ireny. Andramo ireo zavatra ireo amin'ny fitsidihanao an'i New Delhi ary azo antoka fa hipoaka ianao!